पाकिस्तानमा सिस्टर्स डे मनाउन जारी गरिएको उर्दी तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः माघ २९, २०७५ - साप्ताहिक
इस्लाम धर्मको प्रचलनअनुसार काकाको छोरीसँग विवाह गर्ने पहिलो हक ठूलो बुबाको छोराको हुन्छ । त्यही कारणले पाकिस्तानमा भ्यालेन्टाइन डेको सट्टा दिदी–बहिनी डे मनाउने उर्दी जारी गरिएको होला । कुरा यसरी पनि बुझौं न ।
प्रेम गर्न पाउनुपर्छ । आफूले नचाहे बेग्लै कुरा हो तर प्रेम गर्न चाहने ले त गर्न पाउनुपर्‍यो नि । पाकिस्तानमा मानव अधिकार छैन कि क्या हो ?
राष्ट्रिय एकता दिवस तथा सहिद दिवस त नमनाउने देशमा भ्यालेन्टाइन डेको कुरा गर्ने ? यिनलाई जेल हाल सरकार ।
मलाई लाग्छ राम्रै हो ।
भ्यालेन्टाइन डे मनाउने चक्करमा महँगो गिफ्ट दिएर प्रेमी–प्रेमिका खुसी पारे पनि ती प्रेमी–प्रेमिका भविष्यमा आफ्नो हुन्छन् कि हुँदैनन् थाहा हुँदैन । पैसाको सत्यानाश मात्र हुन्छ तर आफ्ना दिदी–बहिनी सधैं आफ्नै हुन्छन् । अर्काको घर गए पनि आफ्ना दाजुभाइलाई सम्झन्छन्, आवश्यक पर्दा सहयोग गर्छन् ।
अरू देशले जेसुकै गरून्, तर प्रेम दिवस नेपालसँग सरोकार राख्ने विषयचाहिँ होइन ।
यो साह्रै राम्रो थालनी हो । पश्चिमा संस्कृतिलाई यसैगरी दुरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
भ्यालेन्टाइन डेलाई नेपालमा भालेपोथी दिवसका रूपमा मनाउँदा कसो होला ?
अरुको देशको के कुरा गर्नु ? आफ्नो देशमा मनाउनु पर्ने विभिन्न दिवस तथा चाडपर्वको त सरकारलाई मतलव छैन ।
खै कस्तो लाग्यो भन्नु ? अर्काको देशमा भएको कुरा, आफ्नो देशमा भएको भए भन्न हुन्थ्यो । नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु ।
केटीलाई त ठिकै हो, केटाहरूका लागि त अत्याचार नै भयो नि ।
सही हो, आफ्नो देश, आफ्नै चलन बेस्ट ।
राम्रै हो नेपालमा पनि यस्तै उर्दी जारी गर्नुपर्‍यो ।
एकदम सही लाग्यो । भड्किलो रूपमा भ्यालेन्टाइन डे मनाउने युवापुस्तामा राष्ट्रियता जगाउने कदम स्वागतयोग्य छ । अंग्रेजी न्यु इयरमा नेपालमा टोपी दिवस मनाएझैं सकिन्छ भने यो दिन कुनै राष्ट्रिय पर्व मनाऊ ।
मलाई त सारै मनपर्‍यो । हामीले पनि नेपालमा भ्यालेन्टाइन डेलाई मान्यता दिनु हुँदैन यो हाम्रो संस्कार होइन । रह्यो माया गर्ने वा देखाउने कुरा... के माया दसैं–तिहार जस्तो हो र वर्षमा एकपटक मात्र दर्शाउनुपर्ने ?
हामी सिङ्गललाई के सिस्टर के भ्यालेन्टाइन ? उस्तै–उस्तै हो ।
वीर विक्रम शाहदेव
आ–आफ्नो देशको नियम हो, हामीले यसमा टाउको दुखाउन जरुरत छैन ।
निर्णय सही लाग्यो, हाम्रो नेपालमा पनि यस्तै नियम लागू गर्नुपर्छ ।
पाकिस्तान जस्तो कट्टर धार्मिक मुलुकबाट अरू के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?
प्रेम गर्ने जोडीका लागि त्यही एक दिन पो महत्वपूर्ण हुन्थ्यो कि ? दिदी–बहिनी दिवस मनाउनैपरे अरु कुनै दिन मनाए हुँदैन !
मलाई त सही लाग्यो । आफ्नो परम्परा जोगाउन तथा बढ्दो पश्चिमीकरणलाई निरुत्साहित गर्न केही त गर्नैपर्छ ।
एक दम राम्रो लाग्यो । नेपालमा पनि यस्तै नियम लागू गर्नुपर्छ ।
जसरी पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनले प्रेमका लागि निषेधज्ञा तोडेर प्राण उत्सर्ग गरेका थिए, तिनै पादरीको सम्झनामा भ्यालेन्टाइन डे मनाइने कुरा मरिगए उचित लागेन, बरु पादरीले झैं त्यहाँका हरेक प्रेमी–प्रेमिकाले उर्दी (फतवा) तोडेर भ्यालेन्टाइन डे मनाए अर्को इतिहास पो रचिन्थ्यो कि ?